အကြောင်း - Omaska
အီးမေးလ်ပို့ရန် : sales018@baigouluggage.cn
ခရီးဆောင်သေတ္တာအဖုံး & ခါးပတ်
OEM / လိမ္မော်ရောင်ဝန်ဆောင်မှု
ကုမ္ပဏီမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အချို့သောနာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်ဝယ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအဖြစ် Langchao Omaska ​​Balmatik ရှိပါတယ်။
ထုတ်ကုန်တွင်, တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးကိုစံချိန်စံညွှန်းထုတ်ကုန်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖှံ့ဖွိုးတိုးကနေထုတ်လုပ်မှုထူထောင်လျက်ရှိသည်။ ဝန်ဆောင်မှုတွင်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဧရိယာကနေကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်အားလုံးအချိန်ကိုကျေနပ်နေကြသည်။
ကုမ္ပဏီစျေးကွက်၏အခြေခံပေါ်တွင်ကြိမ်နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အတူတက်တတ်၏။ ကုန်ပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးသော catagory အစားတစ်ဦးတည်းသာကြင်နာဖို့ပြောင်းပေးပါ။ ကိုယ်ပိုင်အမိန့်အစားသာအစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်များလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
"နောက်ထပ်လူတွေကအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များဖောက်သည်များပိုမိုအကျိုးခံစားခွင့်မှကျေနပ်မှုမှကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ" ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်, ဖောက်သည်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ထံအပ်နှံ!
"ဂရုတစိုကျတိုင်းဖောက်သည်အမှုဆောင်ခြင်း, ဂရုတစိုက်တိုင်းထုတ်ကုန် Making" Tianshangxing အသင်း၏ညှနျကွားဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းထုတ်ကုန် Tianshangxing အပေါ်လုပ်ဆောင်နေသည်ထာဝရရည်မှန်းချက်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်အိပ်မက်နှင့်အတူလူတစျစုအံ့ဘွယ်သောအမှုဖန်တီးလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုလက်တွဲတို့နှင့်ကြီးသောအောင်မြင်မှုအတူတူလုပ်ကြပါစို့။ ကျနော်တို့လမ်းပေါ်မှာရှိသမျှအချိန်များမှာ!
စက်ရုံလိပ်စာ: NO.12 Yanling လမ်း, Qunyu လမ်း, မှန် CT စက်စက်မှုပန်းခြံ, Baigou မြို့, (Gaobeidian မြို့) Baoding မြို့, Hebei ပြည်နယ်, တရုတ်။
အနီးဆုံးလေဆိပ်: Tianjin Binhai လေဆိပ် (သို့မဟုတ်ဘေဂျင်းမြို့တော်လေဆိပ်သို့)
ဒါဟာကားဖြင့်စက်ရုံမှ Tianjin သို့မဟုတ်ပေကျင်းလေဆိပ်ကနေ 3hours ကြာ
အနီးဆုံးဘူတာရုံ: Baigou ဘူတာရုံ (သို့မဟုတ် Gaobeidian အရှေ့ဘူတာရုံ)
ဒါဟာကားဖြင့်စက်ရုံမှ Baigou stationt ထံမှ 20minutes ကြာ
ဒါဟာကားဖြင့်စက်ရုံမှ Gaobeidian အရှေ့ဘူတာမှ 40minutes ကြာ
စက်ရုံအဆက်အသွယ်လူတစ်ဦး: မစ္စတာ Allen က (အရောင်းမန်နေဂျာ)
ဆက်သွယ်ရန်မိုဘိုင်း NO .: 0086 15350615781
အီးမေးလ်: sales018 @ ခ aigouluggage.cn
E-mail ကို : allen@chinabaigou.com.cn
ဝက်ဘ်ဆိုက် : www.tsxluggage.com
စက်ရုံလိပ်စာ : 12, Yanling လမ်း, အနောက် Xingsheng လမ်း, Baigou မြို့, Baoding, Hebei, တရုတ် (ပြည်မကြီး),
High Quality Suitcase, ကလေးများပုံနှိပ်သတ်မှတ်မည် 6pcs , Suitcases, Wholesale Suitcases, Best Sale Bags, ကျောင်းအိတ် ,